Dacwadaha la xiriira dambiyada Internet-ka oo kordhay. - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Tirada dacwadaha dambiyada internet-ka oo sii badanaya: Sawirka: Scanpix
Dacwadaha la xiriira dambiyada Internet-ka oo kordhay.
La daabacay tisdag 8 november 2011 kl 15.57
Waxaa sanadkii hore ee 2010-ka sii labo jibaarneed dacwadaha soo gaara booliska ee la xiriira dambiyada xagga Internet-ka sida email-lo dadka laga jabsaday iyada oo sannadkana si sidaasi oo kale booliska ay soo gaarayaan dacwado arrimahaasi la xiriira sdia uu sheegay golaha tirikooba dambiyada ee (BRÅ).
Sanadkii 2010-ka dacwado kor u dhaafaya 2 300 oo ah dambiyo dad laga xaday xogaha sirta ee Internet-kooda ayaa soo gaaray booliska iyada saddexdii bil ee ugu horreeyay sanadkana dacwadaha ceynkaa ah ee soo gaaray bileyska ay kor u dhaafeen 2200.
Qeyb ka mid ah dacwadahan ayaa u badan maseyr ku jira rag hore ula saaxiib ahaa dumar oo markii ay kala tagaan isku daya in ay nolosha ku arbushaan dumarkaasi.
Iska bedel lamabrada sirta ee emailkaaga markii aad kala boodaan saaxiibkaaga , ayay talo ahaan u soo jeedisay Helene Gestrin oo ah dacwad ooge.
Dhowaantan ayaa waxaa ka furmeysa magaaladda Linköping dacwad loo heysto nin 31 jir ah oo loogu shakisanyahay in ku basaasayay saaxiibtiisa ay kala tageen barnaamij uu ku shubay kombuyuutarkeeda.
Ninkan ayaa ku shubay kombuyuutar barnaamij wax lagu basaaso kaasi oo diiwaan gelinaya sida ay gabadha uu xiriirka la lahaa u isticmaasho kombuyuutarkeeda sida bogaga Internet-ka ee ay booqato iyo fariimaha ugu soo dhaca emailkeeda.
Ninkaasi ayaa dafirsan dacwada loo heysto laakiin Helene Gestrin oo ah dacwad ooge ayaa sheegtay in ninkaasi uu ka ogaaday saaxiibadiisii hore arrimo badan oo uusan xaq u laheyn in uu ka ogaado.